Shiinaha oo dhakhaatiir la socota xaaladda caafimaad ee Kim u diray Waqooyiga Kuuriya - Calanka.com
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxaa dowladda Shiinaha ay u dirtay koox dhakhaatiir ah dalkaasi Waqooyiga Kuuriya kuwaas oo sida la sheegay la socon doona xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa soo shaac baxayay warar is-khilaafsan kuwaas sheegayay in xaaladda caafimaad ee Kim ay liidato kadib qalliin looga sameeyay dhanka wadnaha.
Sarkaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay warkan u sheegay warbaahinta CNN , isagoona xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha dalka Waqooyiga Kuuriya Kum Jong-un ku sheegay mid aad u liidato kadib markii qalliin caafimaad lagu sameeyay dhawaan.
Sirdoonkan ayaa sheegay in hoggaamiye Kim qalliinka dhanka wadnaha ah lagu sameeyay 12-ka bishan April, waxaana cabashadiisa dhanka wadnaha ah soo bilaabatay bishii Agosto ee sannadkii tagay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in culeyskan dhanka wadnaha uu uu mr. Kim kaga yimid dhanka sigaarka oo uu aad u cabo, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa walaac dhankiisa ka muujiyay xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Mar wax laga weydiiyay Trump xaaladda caafimaad ee Kim xilli uu ka warbixinayay xaaladda cudurka coronavirus ayaa waxa uu sheegay in uusan wax dhaafsiisan wararka ay warbaahinta qorayaan uusan kala socon xaaladda caafimaad ee Kim.
Trumo ayaa yiri ” – Wax dheeraad ah kalama socdo, laakiin waxaan idiin xajiijinayaa in uu yahay nin wanaagsan oo aan la doonayo wanaag iyo in uu caafimaado”.
Trump ayaa sheegay haddii ay jiraan wararkan la isla dhex marayo ay xaalaaddu tahay mid khatar ah islamarkaana uu ka walaacsan yahay.
Waxa uu hadalkiisa uu siiraaciyay mr. Trump in haddii qof kale uu hoggaamin lahaa dalkaasi ay xilligan dagaal kula jiri lahaayeen Waqooyiga Kuuriya.
La taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweyne Trump, Robert O’Brien ayaa dhankiisa sheegay in ay si dhow ula socom doonaan xaaladda caafimaad ee Kim maadaama dalkaasi yahay dal xir-xiran.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa saaxadda laga waayay hoggaamiye Kim, waxaana ay taasi dhalisay in ay soo baxaan warar is-khilaafsan oo xaaladdiisa caafimaad looga hadlayo.
Waxaa sidoo kale shaki abuuray kadib markii uu Kim ka qeybgeli waayay xuska dhalashada awoowihii taas oo ku beegneyd 15 April.